Ardayda waxay kahadlaan isbedelka ku yimaada iskuulkooda | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Sii ardayda dugsiga sare laba saacadood oo kaliya waxay beddeli karaan adduunka - ama ugu yaraan dhaqanka dugsigooda. Taasi waxay ahayd hordhaca ka dambeeya Shirweynihii Dhawaan ee Codadka Isbadalka Ardayda ee lagu qabtay Dugsiga Sare ee Stillwater Area High School.
Ku dhowaad 130 arday ayaa isu soo baxay subaxnimadii Jimcaha si ay si furan uga hadlaan caqabadaha ay la kulmaan, ama ay kala kulmeen xirfaddooda waxbarasho. Shirka noociisa noociisa ahaa wuxuu ahaa mid ardaydu hogaaminayso lana fududeeyay, wuxuuna caruurta siiyay meel aamin ah oo looga hadlo arimaha ay ku arkaan iskuulkooda - laga soo bilaabo cunsuriyada iyo eexda hay'adaha si sinaan la’aan loogu helo ilaha iyo waxqabadyada. Ardayda asalka kala duwan, dhaqamada, jinsiyadaha, iyo diimaha waxay ku kulmeen kooxo yar iyo weyn si ay u wadaagaan fikradaha una soo saaraan xalal wax looga qabto arrimaha ay ku wajahayaan dugsigooda.
"Waxay ka dhigan tahay wax walba," ayuu yiri arday sare, oo u adeegay sidii hogaamiye miis intii uu socday shirku. “Aad ayey u fiicantahay inaad aragto waxyaabahan oo la soo kicinayo ugu dambayntiina waxaa jira isbadal ka socda Dugsiga Sare ee High Area Area. Waa nala maqlayaa oo dadku waa dhageysanayaan. Aad ayaa loo baahan yahay waana wax lagu farxo in ugu dambayn dadku dhageystaan. ”
Intii lagu guda jiray wada hadalada ardaydu waxay wax ka qabteen arrimaha waaweyn si xalka loo saaray. Waxay ka wada hadleen sida marin u helka ilaha iyo waxqabadyada iskuulka inta badan ay ku tiirsan tahay xaaladda dhaqan-dhaqaale ee ardayda. Waxay kahadleen sida barnaamijka hibada iyo hibada ee degmadu uu kakooban yahay inta badan ardayda cadaanka ah oo umuuqda inaysan heli karin ardayda midabka leh. Waxay ka wada hadleen baahida loo qabo in la helo shaqaale kala duwan si ay ardaydu u arkaan macallimiin iyaga u eg. Waxay kaloo kahadleen sidii ardayda iskuulka loo siin lahaa cod dheeri ah iyo baahida loo qabo in deegaanka iskuulka laga dhigo mid loo wada dhan yahay oo la ixtiraamo.
"Shirka sifiican ayuu udhacay," ayuu yiri Cornelius Rish, xiriiriyaha dhaqanka ee degmada oo gacan ka gaystay taageerida shirka. Qaar badan oo ka mid ah carruurteennu waxay u oomanaayeen in la maqlo. Ma aha oo kaliya fursadda in la maqlo, laakiin ogaanshaha inay jiri doonto tallaabo dabagal ah oo ku socota. Jawaab celinta carruurta waxay ahayd mid aad u weyn. ”
Fikradaha iyo xalalka la soo uruuriyay intii shirku socday waxaa lala wadaagi doonaa hoggaamiyeyaasha degmada iyo guddiga dugsiga sidii talooyin loogu abuuri lahaa waxbarasho loo siman yahay, loo hagaajiyo dhaqanka iskuulka loona oggolaado ardayda inay helaan dhammaan ilaha ay u baahan yihiin dugsiyada aagga Stillwater.